Xisbiyada UPD iyo Wadajir oo ay ka dhex tafatay | KEYDMEDIA ONLINE
Xisbiyada UPD iyo Wadajir oo ay ka dhex tafatay
Dagaal qabow ayaa baraha bulshada ku dhex marayay dhowrkii maalin ee la soo dhaafay taageerayaasha Xisbiyada siyaasadeed ee Wadajir iyo Midowga Horu-marka iyo Nabadda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Taageerayaasha labada Xisbi ee ay kala hoggaamiyaan Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa isku dhacay, kadib markii dhalinyaro ka tirsan UPD ay billaabeen dacaayad ka dhan ah hoggaamiyaha Wadajir, CC Warsme.
Tan iyo markii Hoggaamiyaha Wadajir, uu ku dhawaad shan kun oo dhalinyaro u badan kula hadlay barata Clubhouse, 12-kii bishaan, waxaa billowday dagaal ka dhan ah oo isla barta Clubhouse kasii socday, isla markaana hor boodayaan xubno dhalinyaro ah oo ka tirsan UPD.
Xaaladda ayaa cirka isku sii shareertay, kadib markii uu maata Wariye caan ah oo madax-bannaan sheegay in ku dhawaad, muddo hal sano ah ay xubno ka tirsan UPD, oo Xildhibaanno, Wasiirro hore iyo siyaasiyiin kale leh ay abaabuleen, weerarka baraha bulshada ee ka dhanka ah CC Warsme.
Arrinta ayaa bannanka timid kadib markii Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah Madaxda UPD uu maanta ku eedeeyay CC Warsame, in uu lacag ku bixinayo eed aan waxba ka jirin, isagoo saaxiibadisa ugu baaqay in ka roonaadaan Warsame, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Kadib markii uu halkii ugu sarreysay gaaray Khilaafka labada taageere ee Xildhibaan Mahad Salaad ku soo dhex dhacay, waxaa xalka arrintaan u istaagay Xildhibaanno iyo siyaasiyiin Mucaarad ah, si aan loo kala jibin Mucaaradka hadda ku mideysan diidmada Farmaajo.
Ugu danbeyn Mahad Salaad ayaa ka saaray qoraakii uu soo dhigay barihiisa bulshada, wuxuuna sheegay inuu taas u sameeyay kadib codsi kaga yimid saxiibadiisa Mucaaradka.
Labada hoggaamiye ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayay u badan tahay in aysan arrintaan wax badan kala socon, walina labadoodu kama aysan hadlin.
Taageerayaasha labada dhinac ee dagaalka qabow ku dhex maray baraha bulshada ayaa ku medeysan arrigtida ah in dalka laga qabto doorasho la isla oggolyahay, khatarta uu Farmaajo dalka ku soo wadana laga hor tago.